မန်စီးတီး နဲ့ လီဗာပူးတို့ အခြား အသင်းတွေထက် ဘာကြောင့် ခေါင်းတစ်လုံး ပိုသာနေသလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ဟိုဆေးမော်ရင်ညို - SPORTS MYANMAR
မန်စီးတီး နဲ့ လီဗာပူးတို့ အခြား အသင်းတွေထက် ဘာကြောင့် ခေါင်းတစ်လုံး ပိုသာနေသလဲ ဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်တဲ့ ဟိုဆေးမော်ရင်ညို
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နည်းပြဟောင်း ဟိုဆေး မော်ရင်ညို က ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား အတွက် ရေပန်းအစားဆုံး အသင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ မန်ချက်စတာစီးတီး နဲ့ လီဗာပူး တို့ရဲ့ ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်က အသင်းရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ တွေဟာ အင်္ဂလန် မှာ ဘယ်အသင်းမှာ လိုက်မမှီ ဘူးလို့ ယုံကြည် နေပါတယ်။
မန်စီးတီး နဲ့ လီဗာပူး အသင်း တို့ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ တုန်းက သမိုင်း တစ်လျှောက် ပြိုင်ဆိုင်မှု အပြင်းထန်ဆုံး Title race ကို ဆင်နွှဲ ခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ အမှတ်ပေး ဖလား အတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှုဟာ ပွဲစဉ် ၃၈ အထိ အကြိတ်အနယ် ဖြစ်ခဲ့ကာ နောက်ဆုံး မှာတော့ ပက်ဂွာဒီယိုလာ ရဲ့ အသင်းဟာ ရမှတ် ၉၈ မှတ်နဲ့ ယာဂန်ကလော့ ရဲ့ အသင်းထက် ရမှတ် ၁ မှတ် ပိုသာ ခဲ့ကာ ၂ ရာသီဆက်တိုက် အောင်ပွဲခံ နိုင်ခဲ့ ပါတယ်။
ဒီရာသီမှာလည်း ၎င်းတို့ရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုကို ဆက်လက် မြင်တွေ့ နေရပြီး ရာသီ အစ ခြေစွမ်းတွေ အရ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေး ဖလား ဟာ လီဗာပူး နဲ့ မန်စီးတီး တို့ကြား နောက်တစ်ကြိမ် အဓိက ပြိုင်ဆိုင် သွားရမယ့် ပုံစံ ဖြစ်နေပြီး လီဗာပူး ဟာ လက်ရှိ ပွဲစဉ် ၄ အပြီးမှာ မန်စီးတီး ကို ၂ မှတ် ဖြတ်ကာ ထိပ်ဆုံးကနေ ဦးဆောင် နေပါတယ်။
ချဲလ်ဆီး နဲ့ မန်ယူနိုက်တက် နည်းပြဟောင်း ဖြစ်သူ မော်ရင်ညို ကတော့ အဆိုပါ နှစ်သင်းစလုံး ရဲ့ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်က အသင်း ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံ တွေဟာ အခြား အင်္ဂလန် ပြိုင်ဘက် တွေထက် ခေါင်းတစ်လုံး ပိုသာ နေတယ်လို့ ယုံကြည် နေပါတယ်။
မော်ရင်ညို က “ကျွန်တော် ကတော့ ဒီကလပ် တွေရဲ့ ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ပုံကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ စီးတီးကို ကြည့်လိုက်ပါ။ အသင်းပိုင်ရှင် ၊ ဖာ၇န် ဆိုရီယာနို (chief executive) ၊ ဘစ်ဂီရီစတိန်း (ဘောလုံး ဒါရိုက်တာ) ၊ ပက်ဂွာဒီယိုလာ ၊ ပက်ရဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ နဲ့ ပြီးတော့ ကစားသမား တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်း ထားပါတယ်။ ဒါကို ကြည့်ရတာ သဟဇာတ ဖြစ်နေတယ် ၊ စည်းလုံး ညီညွှတ် နေတယ် ၊ တစ်ဦးရဲ့ အမြင်ကို တစ်ဦးက ကောင်းကောင်း နားလည် နေတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့မှာ အရည်အသွေး ရှိပြီး ၊ တူညီတဲ့ စီမံကိန်း နဲ့ တူညီတဲ့ အိုင်ဒီယာ တွေကို အတူတကွ အားထုတ် ကြပါတယ်။
လီဗာပူး လား ? ယာဂန်ကလော့ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အနေအထား မှာ ရှိနေတယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ သူဟာ အရမ်းကို တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ဖြစ်နေ ပါတယ်။ သူဟာ သူ့ရဲ့ အပိုင်းကို ကောင်းကောင်း ထိန်းထား နိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆ ပါတယ်။ သူ့ကို အမြင်တူတဲ့ သူတွေ ကလပ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ တွေက ထောက်ပံ့ ပေးထား ပါတယ်။
အိုကေပါ။ ပက်ဟာ အရမ်းကို တော်တဲ့ နည်းပြပါ။ ယာဂန် ကလည်း အရမ်း ထူးချွန်တဲ့ နည်းပြပါ။ အကယ်၍ မနက်ဖြန် သူတို့ ထဲက တစ်ဦး အသင်းကနေ ထွက်ခွာပြီး နောက်ထပ် ထိပ်တန်း နည်းပြ တစ်ဦး ၀င်ရောက်လာခဲ့မယ် ဆိုရင်..အမှန်ပါပဲ။ ၀င်လာမယ့် နည်းပြဟာ သူတို့လိုပဲ ထိပ်တန်း နည်းပြ တစ်ဦးတော့ ဖြစ်နေ ရပါမယ်။ ကျွန်တော့် အမြင့် ကတော့ အသင်းဟာ ဒီလို အဆင့်မှာ ဆက်ရှိ နေဦးမယ်လို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ ဒီလိုမျိုး စွမ်းဆောင်ရည် တွေရဲ့ အခြေခံဟာ ဒီက လာတာ ပါပဲ။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။
လက်ရှိမှာ အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်မှာ ရာနှုန်းပြည့် နိုင်ပွဲနဲ့ ခရီးဆက် နေတဲ့ လီဗာပူးဟာ မနက်ဖြန် မှာတော့ နယူးကာဆယ် ကို အိမ်ကွင်းမှာ လက်ခံ ယှဉ်ပြိုင် ကစား ရမှာ ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ ကလပ် စံချိန် ၁၃ ပွဲဆက် အနိုင်ကို ဆက်လက် တိုးမြှင့် သွားဖို့ ရည်မှန်း နေသလို မန်စီးတီး ကတော့ တန်းတက် နော့ဝှစ် ကို အဝေးကွင်းမှာ သွားကစားကာ လီဗာပူးကို အနီးကပ် ဖိအား ပေးဖို့ ရည်ရွယ် နေပါတယ်။
မနျစီးတီး နဲ့ လီဗာပူးတို့ အခွား အသငျးတှထေကျ ဘာကွောငျ့ ခေါငျးတဈလုံး ပိုသာနသေလဲ ဆိုတာ ရှငျးပွလိုကျတဲ့ ဟိုဆေးမျောရငျညို
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ နညျးပွဟောငျး ဟိုဆေး မျောရငျညို က ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလား အတှကျ ရပေနျးအစားဆုံး အသငျးတှေ ဖွဈကွတဲ့ မနျခကျြစတာစီးတီး နဲ့ လီဗာပူး တို့ရဲ့ ကနျ့လနျ့ကာ နောကျကှယျက အသငျးရဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံ တှဟော အင်ျဂလနျ မှာ ဘယျအသငျးမှာ လိုကျမမှီ ဘူးလို့ ယုံကွညျ နပေါတယျ။
မနျစီးတီး နဲ့ လီဗာပူး အသငျး တို့ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ တုနျးက သမိုငျး တဈလြှောကျ ပွိုငျဆိုငျမှု အပွငျးထနျဆုံး Title race ကို ဆငျနှဲ ခဲ့ကွပွီး ၎င်းငျးတို့ရဲ့ အမှတျပေး ဖလား အတှကျ ပွိုငျဆိုငျမှုဟာ ပှဲစဉျ ၃၈ အထိ အကွိတျအနယျ ဖွဈခဲ့ကာ နောကျဆုံး မှာတော့ ပကျဂှာဒီယိုလာ ရဲ့ အသငျးဟာ ရမှတျ ၉၈ မှတျနဲ့ ယာဂနျကလော့ ရဲ့ အသငျးထကျ ရမှတျ ၁ မှတျ ပိုသာ ခဲ့ကာ ၂ ရာသီဆကျတိုကျ အောငျပှဲခံ နိုငျခဲ့ ပါတယျ။
ဒီရာသီမှာလညျး ၎င်းငျးတို့ရဲ့ ပွငျးထနျတဲ့ ပွိုငျဆိုငျမှုကို ဆကျလကျ မွငျတှေ့ နရေပွီး ရာသီ အစ ခွစှေမျးတှေ အရ ဒီရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျ အမှတျပေး ဖလား ဟာ လီဗာပူး နဲ့ မနျစီးတီး တို့ကွား နောကျတဈကွိမျ အဓိက ပွိုငျဆိုငျ သှားရမယျ့ ပုံစံ ဖွဈနပွေီး လီဗာပူး ဟာ လကျရှိ ပှဲစဉျ ၄ အပွီးမှာ မနျစီးတီး ကို ၂ မှတျ ဖွတျကာ ထိပျဆုံးကနေ ဦးဆောငျ နပေါတယျ။
ခြဲလျဆီး နဲ့ မနျယူနိုကျတကျ နညျးပွဟောငျး ဖွဈသူ မျောရငျညို ကတော့ အဆိုပါ နှဈသငျးစလုံး ရဲ့ ကနျ့လနျ့ကာ နောကျကှယျက အသငျး ဖှဲ့စညျး တညျဆောကျပုံ တှဟော အခွား အင်ျဂလနျ ပွိုငျဘကျ တှထေကျ ခေါငျးတဈလုံး ပိုသာ နတေယျလို့ ယုံကွညျ နပေါတယျ။
မျောရငျညို က “ကြှနျတျော ကတော့ ဒီကလပျ တှရေဲ့ ဖှဲ့စညျး တညျဆောကျပုံကွောငျ့လို့ ထငျပါတယျ။ ဥပမာ အနနေဲ့ ခငျဗြားတို့ စီးတီးကို ကွညျ့လိုကျပါ။ အသငျးပိုငျရှငျ ၊ ဖာရနျ ဆိုရီယာနို (chief executive) ၊ ဘဈဂီရီစတိနျး (ဘောလုံး ဒါရိုကျတာ) ၊ ပကျဂှာဒီယိုလာ ၊ ပကျရဲ့ ၀နျထမျးတှေ နဲ့ ပွီးတော့ ကစားသမား တှနေဲ့ ဖှဲ့စညျး ထားပါတယျ။ ဒါကို ကွညျ့ရတာ သဟဇာတ ဖွဈနတေယျ ၊ စညျးလုံး ညီညှတျ နတေယျ ၊ တဈဦးရဲ့ အမွငျကို တဈဦးက ကောငျးကောငျး နားလညျ နတေယျ။ ပွီးတော့ သူတို့မှာ အရညျအသှေး ရှိပွီး ၊ တူညီတဲ့ စီမံကိနျး နဲ့ တူညီတဲ့ အိုငျဒီယာ တှကေို အတူတကှ အားထုတျ ကွပါတယျ။
လီဗာပူး လား ? ယာဂနျကလော့ဟာ ကောငျးမှနျတဲ့ အနအေထား မှာ ရှိနတေယျလို့ ကြှနျတျော ထငျပါတယျ။ သူဟာ အရမျးကို တညျတညျငွိမျငွိမျ ဖွဈနေ ပါတယျ။ သူဟာ သူ့ရဲ့ အပိုငျးကို ကောငျးကောငျး ထိနျးထား နိုငျတယျလို့ ကြှနျတျော ယူဆ ပါတယျ။ သူ့ကို အမွငျတူတဲ့ သူတှေ ကလပျရဲ့ ဖှဲ့စညျးပုံ တှကေ ထောကျပံ့ ပေးထား ပါတယျ။
အိုကပေါ။ ပကျဟာ အရမျးကို တျောတဲ့ နညျးပွပါ။ ယာဂနျ ကလညျး အရမျး ထူးခြှနျတဲ့ နညျးပွပါ။ အကယျ၍ မနကျဖွနျ သူတို့ ထဲက တဈဦး အသငျးကနေ ထှကျခှာပွီး နောကျထပျ ထိပျတနျး နညျးပွ တဈဦး ၀ငျရောကျလာခဲ့မယျ ဆိုရငျ..အမှနျပါပဲ။ ၀ငျလာမယျ့ နညျးပွဟာ သူတို့လိုပဲ ထိပျတနျး နညျးပွ တဈဦးတော့ ဖွဈနေ ရပါမယျ။ ကြှနျတေျာ့ အမွငျ့ ကတော့ အသငျးဟာ ဒီလို အဆငျ့မှာ ဆကျရှိ နဦေးမယျလို့ ကြှနျတျော ထငျပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ အမွငျကတော့ ဒီလိုမြိုး စှမျးဆောငျရညျ တှရေဲ့ အခွခေံဟာ ဒီက လာတာ ပါပဲ။” လို့ ဆိုသှား ပါတယျ။
လကျရှိမှာ အမှတျပေးဇယား ထိပျမှာ ရာနှုနျးပွညျ့ နိုငျပှဲနဲ့ ခရီးဆကျ နတေဲ့ လီဗာပူးဟာ မနကျဖွနျ မှာတော့ နယူးကာဆယျ ကို အိမျကှငျးမှာ လကျခံ ယှဉျပွိုငျ ကစား ရမှာ ဖွဈပွီး ၎င်းငျးတို့ရဲ့ ကလပျ စံခြိနျ ၁၃ ပှဲဆကျ အနိုငျကို ဆကျလကျ တိုးမွှငျ့ သှားဖို့ ရညျမှနျး နသေလို မနျစီးတီး ကတော့ တနျးတကျ နော့ဝှဈ ကို အဝေးကှငျးမှာ သှားကစားကာ လီဗာပူးကို အနီးကပျ ဖိအား ပေးဖို့ ရညျရှယျ နပေါတယျ။